चिनियाँ व्यावसायिक अन्तरिक्ष प्रक्षेपण योजनाहरू बारम्बार असफल भइरहेको खुलासा ! - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Home अन्तराष्ट्रिय चिनियाँ व्यावसायिक अन्तरिक्ष प्रक्षेपण योजनाहरू बारम्बार असफल भइरहेको खुलासा !
चिनियाँ व्यावसायिक अन्तरिक्ष प्रक्षेपण योजनाहरू बारम्बार असफल भइरहेको खुलासा !
काठमाडौं । कुनै समय चीनको आफ्नै “स्पेसएक्स” भनेर चिनिने कम्पनीले चिनियाँ व्यावसायिक अन्तरिक्ष प्रक्षेपण योजनाहरू पूरा गर्न बारम्बार असफल भइरहेको छ। बेइजिङ इन्टरस्टेलर ग्लोरी स्पेस टेक्नोलोजी लिमिटेडलाई iSpace भनेर पनि चिनिन्छ, चीनले व्यावसायिक अन्तरिक्ष प्रविधिको भविष्यको रूपमा चित्रण गरेको थियो, एक रिपोर्टले भन्यो।
कम्पनी iSpace ले Gangsu प्रान्तको Jiuquan स्याटेलाइट प्रक्षेपण केन्द्रबाट Hyperbola-1 (Y1) रकेट प्रयोग गरी सफल प्रक्षेपण (जुलाई 2019) मार्फत ठूलो चिनियाँ अपेक्षाहरू पूरा गर्ने प्रयास गर्‍यो; निम्न पृथ्वी कक्षामा चार पेलोडहरू राख्दै। यो उपलब्धिले iSpace लाई चीनको पहिलो निजी प्रबन्धित फर्म बनायो जसले उपग्रहलाई कक्षमा पठाएको थियो, इनसाइडओभरले एक रिपोर्टमा भन्यो।
2018 मा स्थापना भएको कम्पनीलाई चीनको टेक दिग्गज Baidu र बेइजिङमा रहेको भेन्चर क्यापिटल फर्महरूले समर्थन गरेको बताइएको छ।
अन्तरिक्ष फर्मले चिनियाँ राज्य संस्थाहरू द्वारा प्रदान गरिएको केही निहित राज्य संरक्षण प्राप्त गर्यो। आफ्नो विज्ञप्तिमा, iSpace ले चीनको विज्ञान, प्रविधिको राज्य प्रशासन र देशका अन्य राज्य निकायहरूलाई सहयोगको लागि धन्यवाद दिएको छ।
तर कम्पनीको प्रारम्भिक सफलता यति छिट्टै फिजियो किनकि यसले 2021 मा यसको उच्च प्रोफाइल प्रक्षेपण प्रयासहरूमा पछाडि-देखि-पछाडि असफलताहरूको सामना गर्यो।
क्युबस्याट आकारको फ्याङ्जाउ-२ (आर्क-२) उपग्रहलाई अन्तरिक्षमा लैजान हाइपरबोला-१ प्रयोग गरेर फेब्रुअरी १, २०२१ मा गरिएको कम्पनीको दोस्रो प्रक्षेपण प्रयास अचम्मलाग्दो थियो। त्यसपछि सिन्ह्वाले चिनियाँ सरकारी मिडिया स्रोतलाई उद्धृत गर्दै रकेटले असामान्य रूपमा उडान गरेको र असफल प्रक्षेपणको विशेष कारणहरूको विश्लेषण र अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ, इनसाइडओभरको रिपोर्टले भन्यो।
केही रिपोर्टहरूले असफलताको लागि रकेटमा भएका समस्याहरूलाई दोष दिए। जबकि पर्यवेक्षकहरूले असफल सञ्चालनको श्रेय पनि आरोहणको क्रममा रकेटको बाहिरी भागबाट बाहिर निकाल्न डिजाइन गरिएको फोम इन्सुलेशनको टुक्रालाई दिए। तथापि, फोम गाडीको ग्रिड फिनमध्ये एउटामा उड्यो जसले गर्दा यसको प्रक्षेपणमा परिवर्तन भयो। यसले अन्ततः गाडीको ब्रेकअप निम्त्यायो, रिपोर्टले भन्यो।
कम्पनीले असफलताबाट अगाडि बढ्ने प्रयास गर्‍यो र यस वर्ष फेरि अर्को प्रक्षेपण गर्ने निर्णय गर्‍यो। iSpace ले अगस्ट3मा एउटै Jiuquan आधारबाट हाइपरबोला 1 मार्फत प्रक्षेपण कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्यो। परिणाम अर्को शानदार विफलता थियो, जसलाई फेरि रकेटको फरिङ अलग गर्नमा केही कठिनाइको श्रेय दिइयो। गाडीको लिफ्ट अफ र आरोहण सामान्य देखिए पनि उडानको चरणमा मिसन असफल भयो। कम्पनी द्वारा गरिएको पछिको अनुसन्धानको नतिजा अनुसार, इनसाइडओभरका अनुसार, फेरिंगको सिलिकन रबर विन्डशील्डसँग अड्किएको थियो जसले पेलोडलाई अलग गर्नबाट रोकेको थियो।
Previous articleजोगबनी नाकाबाट निकासी बढ्दै
Next articleचीनसंगको तनावले भारत र ताइवानलाई नजिक धकेल्छ